Mogadishu Journal » Wararkii ugu dambeeyay dhaq dhaqaaqyo ciidamada huwanta ka wadaan duleedka Kismaayo
Mjournal :-Ciidamada Huwanta ee ku sugan duleedka Kismaayo ayaa isu diyaarinaya duulaan lagu qaado deegaanada Al-Shabaab ka maamulaan Jubadda Hoose, kaddib markii maalmihii la soo dhaafay ay socdeen howl gallo iyo dhaq dhaqaaqyo ciidan ay wadeen.
Wararka ayaa sheegaya in Ciidamada Xoogga dalka, kuwa Jubbaland oo taageero ka helaya AMISOM iyo Ciidamo Mareykan ah ayaa la sheegay inay dhaq dhaqaaqyo ciidan ka wadaan deegaanka Baar Sanguuni.
Saraakiisha hoggaamineysa ciidamada ayaa sheegaya in diyaar garowgooda uu yahay sidii ay Al-Shabaab uga saari lahaayeen deegaanada Shabaabka maamulaan.
Ciidamada ayaa la gaarsiiyay saanad ciidan, waxaana maalmihii la soo dhaafay gaarayay deegaanka Sanguuni gaadiid dagaal.
Al-Shabaab ayaa dhaq dhaqaaqyo xooggan ku leh deegaanada Jubbooyinka, iyadoo Gobolka Jubadda Dhexe uu yahay gobolka kaliya ee si buuxda ay degmooyinkiisa gacanta ugu hayaan.
Bishii hore ayay aheyd markii askari Mareykan ah iyo askar ka tirsanaa ciidanka Kumaandooska Soomaaliya lagu dilay weerar duqeyn Al-Shabaab ku qaaday saldhig ay ku lahaayeen Baar Sanguuni, waxaana taas ay keentay inay isaga soo baxeen, balse markii dambe ay dib ugu laabteen.